श्रीलंका संकटः महिन्दा राजपक्षे सहित 12 नेताले देश छोड्नमा रोक - Hindusthan Samachar Nepali
श्रीलंका संकटः महिन्दा राजपक्षे सहित 12 नेताले देश छोड्नमा रोक
12 May 2022 15:59:36
कोलम्बो, 12 मई (हि.स.)। श्रीलंकामा आर्थिक र राजनीतिक संकटबीच अशान्ति रोकिने नाम लिइरहेको छैन। ज्यान बचाउनका लागि नौसेनाको एक अड्डामा लुकेका पूर्व प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपक्षेलाई पक्राउ गरी जेल पठाउने माग उठिरहेछ, त्यही, राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षेले यही साता नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने घोषणा गरेका छन्। यसबीच श्रीलंकाको एक अदालतले महिन्दा राजपक्षे र उनका पार्टीका अन्य 12 नेताले देश छोड्नमा रोक लगाएको छ।
श्रीलंकाका पूर्व प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपक्षेले राजीनामा दिएदेखि भड्केको हिंसा रोकिने नाम लिइरहेको छैन। पूरा देशमा यस समय सरकार विरूद्ध व्यापक प्रदर्शन भईरहेछ। संकटबीच प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने महिन्दा राजपक्षे आफ्ना करीबीहरूमाथि हमलाको मध्यनजर एक नौसेना अड्डामा सुरक्षा घेरामा छन्। यसबीच श्रीलंकामा महिन्दा राजपक्षेलाई पक्राउ गरी जेल पठाउने माग उठ्न थालेको छ। विपक्षी दलले पनि उनलाई पक्राउ गर्ने माग गरिरहेको छ।
यति हंगामा भएपनि श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे पद छोड्न खारेज गरिसकेका छन्। यद्यपि, बिहिवार ट्वीट्सको माध्यमले उनले श्रीलंकामा शान्ति ल्याउने तरीकाहरूको उल्लेख गरे। यसमा उनले संविधानमा संशोधनको साथ विपक्षको साथ अलग-अलग मुद्दाहरूमा चर्चा गर्ने वाचा पनि गरे। उनले भने, ‘छिट्टै नै नयाँ सरकार बनाउने कदम उठाइनेछ ताकि यस देशलाई अराजकतातिर जानदेखि रोक्न सकियोस् औं सरकारको रोकिएको कामहरूलाई अघि बढ़ाउनु सुनिश्चित गर्न सकियोस्। यही साता प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हुनेछ, जससित न केवल संसदमा बहुमत हुनेछ तर उनले मानिसहरूको विश्वास पनि जित्न सक्नेछन्’।
ईरानः खुशीमा उतारे हिजाब, किशोरीहरू र आयोजक पक्राउ
तेहरान, 25 जून (हि.स.)। ईरानको दक्षिणी शहर शिराजमा स्केटबोर्डिङ डे- मा इवेन्टपछि खुशीमा केही किशोरीह..
जलवायु परिवर्तनलाई लिएर राष्ट्रमण्डल देश चिन्तित, मलेरिया पनि चुनौती
किगाली, 25 जून (हि.स.)। पूर्वी अफ्रीकी देश रवान्डामा आयोजित राष्ट्रमण्डल देशहरूको शिखर सम्मेलनमा नेत..
स्पेन-मोरक्कोको सीमामा भागदौड़, 18 अफ्रीकी प्रवासीको मृत्यु
मेड्रिड, 25 जून (हि.स.)। स्पेनको उत्तर अफ्रीकी एन्क्लेव मेलिलासित लागेको मोरक्कोको सीमामा पस्ने प्रय़..
पाकिस्ताननमा 26/11 मुम्बई हमलासित जुड़ेको आतङ्कीलाई 15 सालको सजाय
लाहौर, 25 जून (हि.स.)। पाकिस्तानको एक आतङ्करोधी अदालतले 26 नोभेम्बर 2008 को मुम्बई हमलाको ह्याण्डलर ..